true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 9 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
Isimo Esiphuthumayo yisimo esingaguquki noma isimo lapho kunokuncipha okuncane ekukhiqizeni njengoba kuboniswe kugrafu.
Uma imali yenkampani ihlala ifana noma incipha kancane, lokho Kuyisimo Sokuphuthumayo. Umuntu umholo wakhe uhlala ngokufana noma wehle kancane ngokuhamba kwesikhathi uzoba seSimweni Esiphuthumayo.
Umuntu usebenzisa iFomula Ephuthumayo lapho:
Impilo yakhe uqobo noma isici esithile sayo sihlala sifana noma sincipha.
Usebenzise iFomula Yengozi futhi wathuthela kwiSimo Esiphuthumayo.
IFomula Ephuthumayo yile:
Phakamisa. (Ukuphromotha kusho ukwenza izinto zaziwe, ukukhipha izinto, ukuzenza waziwe, ukukhipha imikhiqizo yakho.)
I-organization noma inkampani ekulesi Simo Sokuphuthumayo (imali engenayo engaguquki noma eyehlayo) kumele ikhuthaze. Lapho inkampani ingenayo imali engenayo, ukuchitha imali ekunyuseni kungabonakala njengento yokugcina yokwenza. Kepha, empeleni, inkampani kufanele ikhuthaze noma ngeke ithole noma yiliphi ibhizinisi elisha.
Njengomuntu ngamunye kufanele ukhiqize.
Ukukhiqiza kusho ukwenza noma ukuqedela okuthile okuwusizo noma okubalulekile. Isibonelo, umdwebi wayefaka amahora amaningi emsebenzini futhi aqedele ukudweba kwakhe.
Shintsha isisekelo sakho sokusebenza (indlela noma indlela yokwenza izinto).
Kufanele ushintshe indlela owenza ngayo izinto ngoba yilokho okuholele Esimweni Esiphuthumayo.
Lokhu kusho ukuthi wehlisela izindleko futhi usebenzise imali encane.
Lokhu kusho ukuthi uzimisele ukuletha imikhiqizo oyikhiqize kusinyathelo 1 sale formula.
Yiba nesiyalo ngokwengeziwe.
Lokhu kungasho ukungaphumi njalo ebusuku, ukujwayeleka kancane emsebenzini, ukusebenza kanzima, hhayi ukucima kakhulu, ungenzi amaphutha amaningi. Konke lokhu kuyingxenye yokuba nesiyalo esithe xaxa.
Ake sibheke isibonelo senkampani esebenzisa iFomula Yesimo Esiphuthumayo. Isitolo sezimbali sinezibalo zokubonisa isimo eziphuthumayo. Bathengisa izimbali nezitshalo ezingaphansi kancane kunangezinyanga ezidlule kanti okwamanje intela abayidingayo ukukhokha isitolo sabo isikhuphukile. Lokhu ngokuqinisekile kuyisimo esiphuthumayo.
Ukuze babhekane nalokhu, ngokushesha baqala ukukhuthaza! Bakha isibonisi esidonsa amehlo, baphinde bapende uphawu lwabo ukuze ukuhamba ngezimoto kudonseleke kakhulu ukungena. I-Valentine’s Day iyeza, ngakho-ke bafaka isikhangiso ephephandabeni lendawo bese bethumela i-email yokukhumbuza abantu ukuthi banikeza izimbali njengezipho. Wonke umuntu ongena esitolo unikezwa ikhadi lebhizinisi elikhangayo. Baze babambe umcimbi esitolo, bemema abazali ukuthi beze nezingane zabo ohambweni lokufunda amagama ezimbali ezahlukahlukene.
Okulandelayo, kufanele bashintshe isisekelo sabo sokusebenza. Bathola ukuthi izimbali ezisesitolo zifa ngokushesha okukhulu njengoba bebengaziniki amanzi anele. Lokhu yikho okuqale Isimo Sokuphuthumayo. Isisekelo sokusebenza sishintshiwe futhi omunye wabasebenzi owabelwe ukunikeza zonke izimbali amanzi ahlanzekile, ahlanzekile njalo lapho kudingeka.
Manje, kufanele babeke imali. Bonke abasebenzi banakekela ukugcina kunoma yikuphi ukungcola. Umnikazi uyeka ukuchitha imali ohambweni lwakhe olubizayo lwanyanga zonke emibukisweni yezimbali ezweni lonke.
Manje kufanele bakulungele ukuletha. Umnikazi kanye nabasebenzi bakhe bamatasa kakhulu bakha inqwaba yezimbali ezinhle zemibukiso ezilungele amakhasimende ukuthi azithenge. Babeka izimbali nezitshalo ezithandwa kakhulu.
Ekugcineni, abasebenzi bayalwa ngumnikazi ukuthi baqondiswe ngokwengeziwe. Wonke umuntu ufika azosebenza ngesikhathi futhi bayeka ukuthatha ikhefu elengeziwe lekhofi. Baqala futhi ukushanela phansi nokusula ikhawunta njalo usuku lonke, ngakho-ke amaqabunga afile ayahlanzwa. Futhi esikhundleni sokuhlala lapho abathengi bephuma esitolo bephethe imithwalo esindayo, bayabasiza ekuthwaleni izimbali zabo eziya ezimotweni zabo lapho zidingeka.
Lesi sitolo sezimbali manje sesiqede iFomula Yesimo Esiphuthumayo njengoba kukhonjisiwe kwizibalo zokubonisa isimo zabo.